FAQs - Xiamen Kinghow yangaphandle Imveliso Co., Ltd.
Zeziphi iintlobo zemveliso ezenziwa nguKingHow?
Sinohlu olupheleleyo lweemveliso esizenzayo, kodwa ubukhulu becala sikhwama. Ubhaka, ibhegi ye-Duffel, ibhegi yokuzivocavoca ezemidlalo, ibhegi yezixhobo, ibhegi epholileyo njl. Njl.
Loluphi uhlobo lwelaphu kunye negama uKingHow osebenza ngalo?
Ipholiyesta, iNylon, Canvas, iOxford, iRipstop yenaliti yokuthintela amanzi, isikhumba se-PU zezona zinto ziqhelekileyo. Inophawu lokushicilela kunye nokuhombisa ziyafumaneka. IKingHow inamava amaninzi okufumana malunga nayo nayiphi na into efunekayo yokuthunga imveliso yakho. Ukuba uneemfuno ezizodwa zezinto esinokuzifumanela zona.
Leliphi ixesha eliqhelekileyo lokukhokelela kwisampulu okanye iodolo?
Ngokwesiqhelo, ukuthathwa kwesampulu kuyakudinga iintsuku ezisi-7 ukuya kwezi-10. Ixesha elikhokelayo eliqhelekileyo lezinto ezenziwe ngokwesiko ziiveki ezi-4-6 ngokuxhomekeke kwiimfuno zokuthunga, ubungakanani, kunye nokufumaneka kwezinto eziluhlaza. Kwiimeko zoku-odola ngokukhawuleza, siya kusebenza nawe kangangoko sinakho ukuhlangabezana neemfuno zomhla wenqanawa yakho.
Ngaba uKingHow uyila okanye uyiphuhlisa imveliso yomthengi?
Ngokwenyani, asiyili kwaye siphuhlise imveliso entsha yomthengi. Kodwa siya kubanceda abathengi bethu ukuba benze lo msebenzi, ngamava ethu sinokunika ingcebiso ngemveliso kwaye sincede sifumane izisombululo zokufumana esona sigqibo.
Ngaba iKingHow ibonelela ngeesampulu?
Isampuli yasimahla ngesiqhelo, kodwa ukuba yenza into entsonkothileyo okanye ifuna ukungunda evulekileyo, kufuneka ubenetyala lokuhlawulela iindleko zophuhliso, ukuseta ukungunda kunye nokuthengwa kwezinto. Xa kufakwa iodolo, intlawulo yesampulu iya kuncitshiswa kwixabiso loku-odola, kwaye isampulu yangaphambi kwemveliso ihlala inikezelwa ukusayinelwa ngaphambi kokuba imveliso iqale.
Ngaba kukho ubuncinci bobungakanani boku-odola?
Kwenziwe i-odolo okanye into eprintwe ngokwesiko, ubuncinci beodolo yamaqhekeza ayi-100 okanye i-500 yeedola Sizama ukufaka abathengi nanini na kunokwenzeka. Nangona kunjalo, ukuba imveliso yethu ayimiselwanga ukulungiselela imveliso yakho ngokufanelekileyo, sinokufuna ubungakanani obukhulu ukugubungela iindleko zokuseta.
Ngaba uKingHow ubonelela ngazo zonke izinto ezingafunekiyo ezifunekayo ukwenza into?
UKingHow ubhetyebhetye kakhulu nokuthengwa kwemveliso ekrwada yemveliso yakho. Ngothungelwano lwethu lwabathengisi, sinokufumana malunga nayo nayiphi na into ngexabiso elifanelekileyo. Kwelinye icala, ukuba umthengi angathanda ukubonelela ngezixhobo kuthi, siyakuvuyela ukuzifumana. Kwizixhobo ezizodwa okanye ezinye izinto ekunzima ukuzifumana, siya kusebenza kunye nawe ukumisela esona sicwangciso sokuthenga.
Liliphi ixesha lokuhlawula elifunwa nguKingHow?
I-KingHow icela ireferensi yamatyala kubo bonke abathengi abatsha kwaye yenza itshekhi yetyala ngaphambi kokuba umsebenzi uqalwe kwi-odolo yabo yokuqala. Sisoloko sicela intlawulo ephantsi ye-30-50% kwi-odolo yakho yokuqala. Ngaphambi kokuthunyelwa komyalelo, uKingHow uya kuthumela i-invoyisi yokulinganisa. Ukuphinda uhlele kwakhona, sinokwenza i-30% yedipozithi kunye ne-70% eseleyo ngokuchasene nekopi ye-B / L.